I-Jackson Hole Towncenter 2BR, i-Jackson Hole Wyoming - I-Airbnb
I-Jackson Hole Towncenter 2BR, i-Jackson Hole Wyoming
U-Terry unokuphawula okungu-501 kwezinye izindawo.
U-90% wezivakashi zakamuva unikeze u-Terry izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Hlala e-Towncenter e-Jackson Hole, futhi uzobe useduze nesenzo sonyaka wonke. I-Jackson Hole ski complex ihlanganisa amahektha angaphezu kuka-3,000 ezindawo ezihlukene, nokugijima okungafika kumamayela amahlanu ubude. Imithambeka ingaphakathi kwamaminithi ukusuka endaweni yokungcebeleka.
Ukungena kutholakala kuphela ngoLwesihlanu noma ngoMgqibelo.
Njengoba i-Teton Mountains enhle ingemuva, indawo yase-Jackson Hole iphinda idale umkhathi wase-Old West. Kukhona imisebenzi ethokozisayo yokuthatha umphefumulo othakazelisayo, kuyilapho indawo ebabazekayo nokuvakasha okuqondisiwe kukhanga umbukeli. Edolobheni, eduze nemigwaqo ehamba ngezinyawo, uzothola izitolo eziwubukhazikhazi lapho izingcweti nabathengisi bekhombisa izinto zabo. Eduze kwedolobha unganambitha ukunambitheka kwe-Old West ohambweni lwesidlo sakusihlwa noma udonse isihlalo sehhashi e-Cowboy Bar. Ebusika, jabulela amahektha angaphezu kuka-3,000 endawo ehlukahlukene yokushushuluza, ukuvakasha okuqondisiwe okunqamula izwe, uhambo lwemoto yeqhwa nomqeqeshi weqhwa. Ehlobo, ungadlala ithenisi, igalofu, nenhlanzi noma uhlele uhambo lokugibela emfuleni wehle nge-Snake River Canyon udlule e-Grand Teton National Park.
I-Towncenter e-Jackson Hole iyindawo encane ye-condominium emaminithi angu-20 nje ukusuka endaweni yamahektha angu-3,000 i-Jackson Hole ski area. Izinsiza zale ndawo zokungcebeleka zihlanganisa ichibi, i-sauna, ubhavu oshisayo, izindawo zokuwasha nezindawo zokosa inyama. Ngesikhathi sokuhlala kwakho, ungabhekabheka ezitolo eziningi zikaJackson noma udle ngokukhetha kwakho ezindaweni zokudlela ezingaphezu kuka-50. Ezinye izinsiza zendawo zihlanganisa ukuqashwa kwezimoto, igrosa, izinsiza zokucwala izinwele kanye nezikhungo zezokwelapha. Le ndawo okungabhenywa kuyo ingamakhilomitha ayisishiyagalolunye ukusuka e-Jackson Hole Airport.